Suchana-Prawidhi - Kinmelpati | Kinmelpati - Nepal's Digital Newspaper
यस्तो छ एनसेलको भ्यालेन्टाइन्स अफर
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, माघ २५ - एनसेलले भ्यालेन्टाइन्स डेको अवसरमा विभिन्न सेवामा सहुलियत अफररु सार्वजनिक गरेको छ। प्रयोगकर्ताले आपूmले छानेको एउटा विषेश नम्बरमा अब सस्तो दरमा कुरा गनुका साथै र रिङ ब्याक टोनमा पनि ५०% छुट पाउने एनसेलले जानकारी दिएको छ।
आइफोनमा नेपाल टेलिकमको फोरजी कसरी चलाउने?
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं,माघ २५ - नेपाल टेलिकमले आजदेखि आइफोनमा फोरजी चलाउन मिल्ने बनाएको छ। तर कसरी नेटकवर्क सेटिङ गर्ने? टेलिकमले ग्राहकहरुलाई निम्नासुर सेटिङ मिलाएर चलाउन सकिने बताएको छ। सबैभन्दा पहिलो एप्पलको वेवसाइटमा जाने (यहाँ छ एप्पलको साइट)...
टेलिकमको फोरजी आइफोनमा पनि चल्ने
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं,माघ २५ - नेपाल टेलिकमको फोरजी आइफोनमा चल्ने भएको छ। यसअघि आफोनले टेलिकमको लोकेशन कोड इनेबल नगरेकोले केही फोनहरुमा चलेको थिएन। आजदेखि टेलिकमको कफोरजी आइफोनका फोरजी चल्ने सबै संस्करणहरुमा फोरजी चल्ने टेलिकमले जानकारी दिएको छ। गएको पुस १७ गतेदेखि काठमाडौं र पोखराबाट नेपाल टेलिकमले पोष्टपेड सिमकार्डमा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो भने माघ २२ देखि प्रिपेडमा।
ओप्पो एफ वान एस लोकप्रिय हुनुका कारण
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडाैं माघ २४ - विशेषगरी सेल्फी पारखीहरु माझ ओप्पो एफवानएसको लोकप्रियता छ । ५ दशमलव ५ ईञ्चको डिस्प्ले सहितको यो फोनले ७२०x१२८० पिक्सेलको रेजोल्युशन दिन्छ । यसले २ सय ६७ पीपीआई पिक्सेल डेन्सिटी दिने क्षमता राख्छ । फोनमा रहेको डिस्प्लेलाई कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास फोर प्रविधि मार्फत सुरक्षा प्रदान गरिएको छ ।
पोष्टपेडलाई ४ जिबी प्रिपेडलाई ४ सय एमबीमात्र!
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौैं,माघ २४ - नेपाल टेलिकमले पुस १७ गते नेपालमै पहिलोपटक फोरजी सेवाको शुरुवात गरेको थियो। काठमाडौं र पोखराबाट मात्र शुरु गरिएको उक्त सेवा पोष्टपेड ग्राहकहरुका लागिमात्र थियो। पोष्टपेडका ग्राहकहरुलाई टेलिकमले माघ १८ गतेसम्म सेवा सुचारु गर्नेहरुलाई प्रत्येक दिन १ जिबीका दर ४ जिबी डाटा निशूलक उपलब्ध गराउने अफर ल्याएको थियो।
नेपाल टेलिकमका डाटादेखि भ्वाइससम्म यस्ता छन् छुट र अफर
रवीन्द्र शाही , काठमाडौं,माघ २२ - नेपाल टेलिकमले १३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नयाँ सुविधासहित सेवामा विभिन्न छुट अफरहरु ल्याएको छ। यसक्रममा पुस १७ गतेदेखि नेपालमै पहिलोपटक फोरजी सेवा सुरु गरेको टेलिकमले आजदेखि प्रिपेड सिमकार्डमा पनि आरम्भ गरेको छ। काठमाडौं र पोखराबाट फोरजी सेवा आरम्भ गरेको टेलिकमले सेवा सुरु गरेका ग्राहकहरुको लागि सुरुका चारदिनसम्म प्रत्येक दिन एकसय एमबी डाटा उपलब्ध गराउने टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिइन्।
टेलिकमले ल्यायो फेसबुक प्याकेज, कसरी लिने ?
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ २२ - नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘फेसबुक प्याकेज’ ल्याएको छ। एक सय एमबिको यो प्याकेज जिएसएम नेटवर्कका सेवाग्राहीले लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ।
टेलिकमको फोरजी आइफोनमा अझै चलेन
रवीन्द्र शाही , काठमाडौं, माघ २२ - नेपाल टेलिकमले गएको पुस १७ गतेबाट पोष्टपेड सिमकार्डमा फोर जी सेवा नेपालमै पहिलोपटक सुरु गरेको थियो। शनिबार १३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रिपेड सिमकार्डमा पनि सुचारु गरेको छ। आइफोन चलाउनेहरुले भने टेलिकमको यो सुविधा लिनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। आइफोनसँग प्राइभेसी सम्झौता नगरेकोले टेलिकमको सिमकार्डमा फोरजी सेवा नचल्ने भएको छ। सेवा संचालनका लागि हरसम्भव प्रयास गरे पनि त्यो सम्भवन नभएको टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए।
जिएसएम तथा सिडिएमए ग्राहकलाई टेलिकमको सहुलियत डाटा प्याकेज
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ २२ - नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए नेटवर्कमा प्रिपेड तथा पोष्टपेड सेवाग्राहीका लागि सहुलियत दरका विभिन्न डाटा प्याकेज ल्याएको छ।
टेलिकमको प्रिपेड सिममा फोरजी शुरु, ४ सय ‘एमबी’ डाटा निशुल्क
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं,माघ २२ - नेपाल टेलिकमले आज देखि प्रिपेड सिमकार्डमा पनि शुरु गरेको फोरजी सेवा सुचारु गर्नेहरुलाई ४ सय एमबी डाटा निशुल्क दिने भएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज सार्वजनिक गरिएको उक्त सेवामा एक दिनमा एक सय एमबीका दरले चारदिनसम्म ४ सय एमबी डाटा प्रयोगकर्ताहरुलाई निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा टेलिकमको रिचार्जमा बोनस
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ २२ - नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवको अवसरमा जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै रिचार्ज कार्डमा बोनस योजना ल्याएको छ। आइतबार अर्थात भोलिदेखि जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड प्रयोगकर्ताले रिचार्ज गर्दा बोनस पाउने छन्।
प्रिपेडका ग्राहकले यसरी इनेवल गर्नुहोस् फोरजी !
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ २२ - मोवाइलमा फोर जी सेवा सुचारु गर्न लङ टर्म इभ्यालुएशन अर्थात एलटिई इनेवल गर्नुपर्छ। एलटिइ इनेवल गर्नका लागि *४४४# थिचेर आवश्यक निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।
टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा थाल्यो फोरजी सेवा
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ २२ - नेपाल टेलिकमले आजदेखि प्रिपेड फोन प्रयोगकर्तालाई पनि फोरजी सेवा थालनी गरेको छ। काठमाडौं र पोखरामा रहेका ग्राहकले यो सेवा सुरु गर्न सक्ने छन्। यी क्षेत्रका पोष्टपेड ग्राहकले भने एक महिनाअघिबाटै फोरजी सेवा चलाइरहेका छन्।
टेलिकमले ल्यायो निशुल्क ‘सिआरबिटी’
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ २२ - नेपाल टेलिकमले मोबाइलमा फोन गर्नेलाई गीत सुनाउनका लागि सिआरबिटी अर्थात ‘कलर रिङ ब्याक टोन’को व्यवस्था थालेको छ। टेलिकमले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर स्थगित भएको सिआरबिटीलाई पुनः निरन्तरता दिएको हो।
पैसाले प्रविधि रोकिंदैन, दश हजार रुपैयाँमै पाइन्छ फोरजी चल्ने मोबाइल
पुरुषोत्तम बस्नेत अध्यक्ष, ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्स, माघ २१ - जतिसुकै शिक्षित मान्छे पनि यसको विज्ञ हुँदैन। त्यसैले ब्यापारीले कति इमान्दार भएर ग्राहकसँग डिल गर्छ त्यो कुरा महत्वपुर्ण हो। त्यसैले सकभर ग्राहक आफैले पनि सचेत हुनुपर्छ। त्यसको लागि मोबाइल ओरिजिनल हो कि होइन? वारेन्टी,ग्यारेन्टी छ कि छैन? सेकेन्ड ह्यान्डलाई पुछपाछ गरेर पो बेचिएको छ कि? त्यस्तै धेरै सस्तोमा पायो भन्दैमा किन्दा पनि ठगिने सम्भावना हुन्छ।
फोरजी त आयो तर सदुपयोग गर्ने कसरी ?
हरि लामिछाने , काठमाडौँ, माघ २१ - आधुनिक प्रविधिमा आधारित पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवाको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन। पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा भित्रिए पनि मुलुकका सबै क्षेत्रको एकसाथ स्तरोन्नति हुन नसक्दा प्रयोगमा चुनौती थपिएको हो।
टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलमा भोलिदेखि ‘फोरजी’ चल्ने
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ २१ - नेपाल टेलिकमले भोलिदेखि प्रिपेड मोबाइलमा पनि फोरजी सेवा सुरु गर्ने भएको छ।भोली टेलिकमले आफ्नो वार्षिकोत्वसवको अवसरमा प्रिपेड सिमकार्डमा पनि फोरजी सेवा सुरु गर्ने टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभनदेव अधिकारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
बजारमा आउने तयारीमा रहेका नोकिया यी दुई फोन
एजेन्सी - स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी नोकियाले नोकिया सिक्सद्धारा आफ्नो धमाकादार पुनारागवनसँगै गरेसँगै यहि २६ तारीकबाट हुने वल्र्ड मोबाइल कँग्रेसको इभेन्टमा २ नयाँ मोडलका फोन सार्ववनिक गर्ने तयारी गरेको छ
क्यान इन्फोटेकमा मोबाइल किन्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट
सुधिर भण्डारी, काठमाडौं, माघ १७ - क्यान इन्फोटेक मेलामा विभिन्न मोबाइल कम्पनीहरु भारी छुटका साथै विभिन्न उपहार दिएर प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारमा उत्रिएका छन्। इन्फोटेकमा मोबाइल अनुसार विभिन्न कम्पनीले ३ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुका साथै सेल्फी स्टिक, मोबाइल कभर, क्यास ब्याकलगायत अफर पनि दिइरहेका छन्। मोबाइल फोन बेच्नका लागि भन्दा पनि आफ्नो उत्पादन सर्वसाधारणलाई चिनाउने उद्देश्यले छुट दिइएको ओप्पो मोबाइलका प्रमोसन म्यानेजर राकेश केसीले जानकारी दिए।
सिस्टम अपग्रेडपछि लाइसेन्सको काम पुनः सुरु
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ १७ - अनलाइनबाट लाइसेन्सको आवेदन दिने काम पुनः सुरु भएको छ। सफ्टवेयर अपग्रेड तथा अप्टिमाइजेसनका कारण झण्डै एक साता रोकिएको काम सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
दुई लाख बढीले क्यान मेलाको अवलोकन गरे
काठमाडौँ, माघ १७ - भृकुटीमण्डपमा जारी ‘सुविसु क्यान इन्फोटेक’ मेलाको चौथो दिनसम्म दुई लाख सात हजार बढीले अवलोकन गरेका छन्। प्रदर्शनीको पहिलो दिन ३४ हजार १५४, दोस्रो दिन ३६ हजार ११८ र चौथो दिन आज ६७ हजार २०८ जनाले अवलोकन गरेका थिए।
नेपाल टेलिकमको व्यापार किन कम? यस्तो छ टेलिकमको बचाउ
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं,माघ १६ - नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले एक कार्यक्रममा, नेपाल टेलिकमले अन्य सेवाप्रदायकको भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेपनि त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्ननसकेको आरोप लगाए। फ्रिक्वेन्सीजस्तो सिमित स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको भन्दै सेवाप्रदायकहरुलाई दबाब दिनेतर्फ झाको संकेत थियो।
लैंगिक हिंसा कम गर्न मोबाइल ‘एप्लिकेशन’
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं,माघ १६ - लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था उज्यालो फाउन्डेशनले अष्ट्रेलियन राजदुतावससँगको सहकार्यमा मोबाइल एप्लिकेशन ल्याएको छ। महिला हिंसाका घटना प्रत्येक दिन भइरहेपनि असुरक्षित दैनिकी विताउनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न सहयोग हुने भन्दै फाउन्डेशनले ल्याएको ‘निडर’ नामको एप सार्वजनिक गरिएको छ।
भृकुटीमण्डपमा जारी क्यान इन्फोटेकमा अवलोकनकर्ताको भीड
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ १५ - दुई दिनदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी सूचना प्रविधि मेला ‘क्यान इन्फोटेक २०१७’ मा अवलोकनकर्ताको उल्लेख्य भीड लागेको छ। शनिबार भएकाले पनि आज अवलोकनकर्ताको भीड लागेको आयोजकले जनाएको छ। बिहिबार शुरु भएको प्रर्दशनीमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुका २ सय २२ स्टल रहेका छन्।
इन्फोटेकको आकर्षणमा गुडाएर लैजान सकिने दमकल
बिनोद आचार्य , काठमाडौं, माघ १५ - भृकुटीमण्डपमा जारी क्यान इन्फोटेकको २३ औं संस्करण मेलामा विभिन्न नयाँ तथा आधुनिक प्रविधिहरु प्रदर्शनमा राखिएका छन्। जसमा मिनी दमकल धेरैको आकर्षणमा परेको छ। अष्ट्रियाको रोजेनबौर कम्पनीले उत्पादन गरेको अल्ट्रा हाइ प्रेसर सिस्टमको यो यन्त्रबाट आगलागी हुँदाको आपतकालीन अवस्थामा प्राथमिक रुपमा नियन्त्रण गर्न मिल्दछ। जसको तौल केबल २ सय ४५ केजी रहेको छ र यसलाई गुडाउँदै जस्तोसुकै साँघुरो स्थानमा पनि लिएर जान सकिन्छ।
टेलिकमको २० हजार रिचार्ज कार्ड हरायो, प्रयोग नगर्नुहोस् यी नम्वर
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, माघ १५ - नेपाल टेलिकमको २० हजार थान रिचार्ज कार्ड आयात गर्ने क्रममा हराएको छ। टेलिकमले एक सूचना जारी गर्दै १ सय अंकित दरका २० हजार थान एनटी रिचार्ज कार्ड हराएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएकाले कन्सुलर सेवा अब अनलाइनबाटै पाउने
काठमाडौं, माघ १४ - वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा रहेका नागरिकले कन्सुलर विभागबाट लिनुपर्ने विविध कानुनी सेवा अब अनलाइनमार्फत नै लिन सकिने भएको छ।
इन्टरनेट प्रदायक भायनेटले ल्यायो ‘ट्रिपल’ फाइदा अफर
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, माघ १४ - इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेटले ‘ट्रिपल’ फाइदा अफर ल्याएको छ। क्यान इन्फोटेकलाई लक्षित गर्दै ल्याएको अफरबाट ग्राहकले डाटा, फलब्याक स्पिडर र शुल्कमा फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
एनसेलले ल्यायो नयाँ एसएमएस प्याक, अब ३ पैसामा एसएमएस
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौंं, माघ १४ - जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ। यस अन्तर्गत सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले अब एनसेल नेटवर्क भित्र अझ सुलभ दरमा एसएमएस सेवाको मज्जा लिन सक्नेछन्।
भृकुटीमण्डपमा सूचना प्रविधिको बृहत मेला (फोटोफिचर)
नारायण महर्जन, काठमाडौं, माघ १३ - क्यान इन्फोटेक मेला २०१७ आजबाट राजधानीको भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल (क्यान)ले आयोजना गरेको मेलाको उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उदघाटन गरे। उद्घाटनका क्रममा उनले परम्परागत काम गर्ने शैलीलाई प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरी आधुनीकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।